Hooyooyin RW Rooble ugu baaqay inuu la xisaabtamo Kulane Jiis | KEYDMEDIA ONLINE
Hooyooyin RW Rooble ugu baaqay inuu la xisaabtamo Kulane Jiis
Kadib xil ka raacdeyntii Kullane Jiis, waxaa soo baxaya baaqyo loo dirayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta, kuwaas oo ku aaddan in la maxakamadeeyo, lagana jaaseeyo danbiyadii uu dalka ka galay intii uu xaafiiska qarsoon joogay.
DOOLOW, Soomaaliya - Marka laga yimaado shacabka Caasimadda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee uu dunuubta waaweyn ka galay Kullane Jiis, waxaa jira birimageydo uu ka xadgudbay oo ku sugan gobolka uu dhibaatada ugu badan ka geystay ee Gedo.
Qaar ka mid ah Haweenka Soomaalieed ee ku dhaqan degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ka codsanaya inuu tallaabo sharci ah ka qaado Kullane Jiis, oo kaliya xil ka qaadis uusan ugu ekeyn, ee laga jaaseeyo dunuubta uu galay.
Faxiyo Maxamed, iyo Hibo Cabdi Cabduullahi, oo ah hooyooyin ku sugan Dooloow, oo fariin muuqaal ah oo soconeysay ku dhawaad 10 daqiiqo, usoo duubay Sii-hayaha Xilk Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa soo bandhigay gabbod-fallo lagula kacay intii uu Kullane Jiis ka talinayay arrimaha Gedo.
Hooyooyinkaan ayaa sheegay in xarig, jirdil, kufsi, caburin iyo masaafuris lagu sameeyay, iyadoo la fulinayo amar uu bixiyay Kullane, waxayna guud ahaan maamulkii Dowadda Federaalku u dirtay Gedo, ay ku eedeeyeen in ay gabbod-fallo waaweyn ka galeen degaannada gobolka.
“Askarta I afduubtay ninka hoggaaminayay wuxuu xiriir la sameynayay taliyaha xasilinta gobolka Bakaal-kooke, isna wuxuu xiriir la sii sameynayay ninka hadda xilka laga qaaday ee Kullane Jiis, aniga waxaa la ii geystay dil, dhac iyo boob, sidaas dadarreed, waxaan RW Rooble, ka codsanayaa inuu ninkaas maxakamadda noo soo istaajiyo”. Ayay tiri Farxiyo Maxamed.
Sidoo kale, Hibo Cabdi, ayaa tiri, “Awal ma aanan hadli karin, waxaan meesha soo fariisanay kadib xil ka qaadistii Kullane Jiis, RW Rooble, waxa haka qabto cabashadeenna, sidoo kale waxaa eedde kula jira, guddoomiyihii hore ee Goboolka Mucalumuu, iyo taliyaha xasilinta Bakaal-kooke”.
Waxaa soo badanaya shaqsiyaadka sheeganaya inuu danbiyo ka galay kullane Jiis, kadib markii laga xayuubiyay xilkii Agaasimihii Shaqaalaha Hay’adda NISA.
Kullune, sidoo kale wuxuu ku eedeysan yahay dilkii Muumino Xaayow, iyo afduubka Ikraan Tahliil Faarax.